Stickman Soccer 2018 na-akpọrọ gị gaa Soccer World Cup dị ka arcade | Gam akporosis
Sitckman Soccer 2018 na-adabere na gam akporo na oge kachasị mmaEbe ọ bụ na ụbọchị ndị a nke egwuregwu ndị otu mba na Soccer World Cup, na nkwụsị, anyị nwere ike igwu egwuregwu a nke dị mfe n'echiche ya, mana nke na-achịkọta ihendori niile ma nwee ọmarịcha egwuregwu.
Anyị na-eche ihu egwuregwu nke na-egosi usoro nke ọmarịcha njirimara na nke ahụ, n'agbanyeghị adịghị eru n'ogo FIFA ma ọ bụ PES, ọ bụrụ na ọ ga-enye ọtụtụ egwuregwu ma anyị nwere ike ịme ihe mgbaru ọsọ. Egwuregwu vidio anyị na-aga site na nyocha iji gosi na enwere ohere maka egwuregwu bọọlụ na ekwentị anyị.
1 Bọọlụ Stickman na-enye ọtụtụ egwuregwu
2 A ezi Arcade nke egwuregwu mara mma
3 Bọọlụ dị mfe ma dị egwu
4 Bọọlụ Stickman ka mma
6 Budata ngwa
Bọọlụ Stickman na-enye ọtụtụ egwuregwu
Bọọlụ Stickman nwere oke ọ nwere, mana nke a apụtaghị na anyị agaghị ekpori ndụ ka anyị dwarfs mgbe anyị nwere nhọrọ nke Brasil n'aka anyị ma ọ bụ ndị egwuregwu si Spain na tiqui taca a ma ama na-eme ihe ha.
Alsokwesịrị ịtụkwasị obi na ọ bụghị nke mbụ Sitckman Soccer kwalitere na ahịa, anyị na-eche ihu usoro nke ga-anwale laghachi na inwe ndị nde 75 nke gafere n’ubi ha. A ghakwara ikwu na site na Stickman Soccer anyị na-eche ihu ihu egwuregwu karịa ihe nkedo zuru ezu, yabụ site na njedebe ndị a na mbụ, ọ ga-adị mfe ịnụ ụtọ ya na-enweghị atụnyere.
A ezi Arcade nke egwuregwu mara mma
Ihe kachasị mma banyere Stickman Soccer 2018 bụ na, ọbụlagodi ma ọ bụrụ na anyị na-eche arcade, anyị nwere ike egwu oge, asọmpi mba, iko ma ọ bụ ọbụna 2018 World Cup n'onwe ya nke dị ugbu a na akụkọ niile. Ndị sokwa ya bụ iwu bọọlụ dịka kaadị edo edo, kaadị uhie, bọtịnụ ọsọ ọsọ, mmeghari ngagharị nwayọ, isi ihe mgbaru ọsọ, gbaa na ama egwuregwu.
Anyị na-ekwu ya n'ihi na ọ bụ atụmatụ ọhụrụ na-eme ka Stickman Soccer 2018 dị nso na egwuregwu nke na-eto ihe egwuregwu mara mma bụ. Anyị nwekwara ike ịhazi ìgwè dị ka ndị egwuregwu. N’agaghị echefu na anyị ga-enwe n’iru anyị a ahịa mbufe nke ị ga-ere ma zụta ndị egwuregwu ahụ anyị kwesịrị iji merie n'egwuregwu na oge.
Bọọlụ dị mfe ma dị egwu
Ejiri Stickman Soccer 2018 mara egwuregwu dị egwu nke anyị ga-amụta ngwa ngwa ịgafe, gbaa n'ike na ihe mgbaru ọsọ ma ọ bụ ndị niile na nkà na-enwe ike na-ezu ohi na bọl si emegide otu. Ọ bụ ezie na anyị enweghị akara mmiri, dị ka ụdị dribble niile, egwuregwu ahụ dị egwu ma nkeji na-agabiga ngwa ngwa mgbe anyị na-anwa ịgbachitere ihe mgbaru ọsọ anyị ma tie onye iro ahụ.
Anyị ga-enwe nhọrọ ịzụ yana ịbanye ngwa ngwa egwuregwu nke nkeji Ọ bụrụ na ọ bụghị, anyị chọrọ ịga ozugbo ruo oge ma ọ bụ asọmpi iko mba ụwa 2018 na Russia. Ọzọ uru ya bụ na ịchọghị igwu egwu n'ịntanetị, yabụ ọ bụrụ na idafu njikọ n'oge ụfọdụ, ị nwere ike ịga n'ihu na-eme bọọlụ n'ụkwụ gị ma na-agbasi ike na goolu.
Bọọlụ Stickman ka mma
Ụlọ ọrụ Djinnworks GmbH Djinnworks GmbH chọrọ inye onyinye a na usoro nke ụkpụrụ dị nso na egwuregwu mara mma. Nke ahụ bụ, akụkọ egwuregwu bọọlụ niile dịka kaadị, mmejọ, ndị Chilian ma ọ bụ nkuku bọọlụ gụnyere, ma n'otu oge ahụ a melitela ya na ọgụgụ isi nke ahụ ga-agba mbọ na ndị otu na-emegiderịta onwe ha nwere ụzọ ha si egwu egwu.
Nke a bụ ebe anyị nwere ike ịchọta ọzọ ikike nke Stickman Soccer 2018, ebe ọ bụ na anyị nwere ike ịga site na igwu egwu megide ìgwè dị mfe na-egwu egwuregwu ebe ndị otu na-emegide ahụ nwere ezigbo aka. Anyị ekwuola na ọ dị anya site na PES na FIFA, ọ bụ ezie na ha nọ n'ụzọ ziri ezi ịghọ nhọrọ dị oke egwu maka egwuregwu mkpanaka; na ndị ọzọ mgbe egwuregwu dị n'ụdị a pụtara kedu ka PUBG Mobile.
Stickman Soccer 2018 bụ n'efu dị ka arcade nke enweghị ike ịrịọ maka ndị ọzọ. Karịsịa ịmara ebe o si bịa mgbe ọ na-enweghị nnukwu bọlbụ ma nwee ọtụtụ egwuregwu. Ọ bụrụ na ị na-achọ egwuregwu ka ị nwee oge ọfụma mgbe ndị otu gị nọ na nkeji ọkara n'asọmpi Iko Mbaụwa, ọ na-ewerelarị oge ịwụnye ya.
Dị ka usoro na-eweta ọtụtụ atụmatụ ọhụrụ
O dribbling ma ọ bụ watermarks
AI chọrọ ịrụkwu ọrụ
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Egwuregwu gam akporo » Soro World Cup Soccer na Stickman Soccer 2018 kpoo